Uncategorized Archives – Satabdi News
२२ भाद्र, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल)को संयोजकमा सुमन देवकोटा ‘अब्दुल’ चयन भएका छन् । मंगलबार बसेको वाइसिएलको बैठकले संयोजकमा देवकोटा र सहसंयोजकमा सुवोध सिर्पालीलाई चयन गरेको हो । यसअघि वाइसिएलको राष्ट्रिय सम्मेलनले पदाधिकारीविनै केन्द्रीय समितिको घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको १०
२१ भाद्र, काठमाडौं । संखुवासभाको मादी नगरपालिका १ को उम्लिङ स्थित तेज बहादुर कार्कीको परिवारमा दुई बच्चा सहित ६ जनाको हत्या गरिएको छ । सोमबार बिहान घटनाको जानकारी पाएलगत्तै अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा तालिमप्राप्त कुकुरसहितको प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जनाइएको छ । तालिम प्राप्त
मित्र राष्ट्रको विरोध गर्नेलाई सूक्ष्म निगरानी गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । नोपल सरकारको गृहमन्त्रालयले विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिको विषयमा विरोध नगर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पतिको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी भईरहेकोले त्यस्ता गतिविधिहरुको सूक्ष्म निगरानी गर्ने चेतावनी दिएको हो । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष
नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति
२५ असार २०७८, शुक्रबार। नेपाल र भारतबीच पहिलोपटक द्विपक्षीय रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको छ । दुवै देशले आज भएको भर्चुअल हस्ताक्षर कार्यक्रममा यस सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । राजदूतहरूको उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा भारत र नेपाल दुवै तर्फका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । यसले सवारीसाधनसहित अन्य विशिष्ट
१४ जेठ, काठमाडौं‌। फिफा वरीयतामा नेपाल १७१औं स्थानमा यथावत रहेको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरीयतामा नेपाल यथावत रहेको हो । अप्रिल ७ मा पनि नेपाल १७१औं स्थानमै थियो । पछिल्लो वरीयतामा जम्मा एक स्थानमा मात्र परिवर्तन भएको छ । युक्रेनसँग गोलरहित बराबरी खेलेको बहराइन
धिमाल ग्रामथान क्षेत्रमा कानेपाेखरी गाउँपालिकाद्वारा अतिक्रमण गर्ने तयारी
जेठ ११, कानेपाेखरी । माेरङकाे कानेपाेखरी वडा नं. ७ स्थित धिमाल समुदायकाे ग्रामथान रहेकाे क्षेत्रमा गाउँपालिकाले व्यवसायीक संरचना निर्माण गर्ने कार्य प्रति धिमाल समुदायले आपत्ती जनाएकाे छ । धिमाल जातीय विकास केन्द्र, कानेपाेखरी गाउँपालिका समिति र धम्कुवा गाउँ टाेल समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँपालिकाकाे साे कदम प्रति आपत्ती जनाएकाे हाे
ओलिको कदम असंबैधानिक मात्र हैन सर्बोच्चको फैसला बिरुद्द पनि छ : अधिवक्ता योन्जन
जेठ ८ - मेरो ब्रह्मले देखेको लेख्छु ! यो संविधानको मर्म अर्थात् भावना ( spirit or letter of law) यस्तो छ ! यो सरकार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(३) अनुसार बनेको सरकार हो ! संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकारले ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ !
अशोक राईको ओलिलाई ब्याङ्ग्य : काग बढि बाठो हुदा फोहोर खान पुगे
जेठ ७ - जनता समाजवादि पार्टि नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले प्रधानमन्त्री ओलि को राजनितिक कदम प्रति आलोचना गरेका छन् । वरिष्ठ नेता राईले फेसबुक स्टाटसमा लेख्दै भनेका छन् काग बढि बाठो भएकै कारण फोहोर खाना पुगेको हो भन्ने कुरा नेपालि राजनितीमा चरितार्थ भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'अनुरोध'मा
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको मतदान शुरु, नतिजा आजै आउने
६ जेठ २०७८, बिहीबार। वाग्मती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतदान शुरु भएको छ । मतदान बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म जारी रहने छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित र विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको जनाएको छ । उपनिर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य ११० र
औषधी बोकेर सङ्क्रमितका घरघरमा उपमेयर
ज्येष्ठ ४,बेलबारी । कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेसँगै बेलबारी नगरपालिकाले आफ्ना गतिविधिहरुलाई थप सक्रिय बनाएको छ।मङ्गलबार बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीको नेतृत्वमा बेलबारी आयुर्वेद शाखा निरीक्षक कुलानन्द यादवसहितको टोलीले नगरभित्रका संङ्क्रमितहरुलाई घरघरमा पुगेर भेटेको छ।विभिन्न प्रकृतिका आयुर्वेदिक औषधीसहित पुगेको नगरपालिकाको टीमले सङ्क्रमितहरुको स्वास्थोवस्था बुझ्नुका साथै विभिन्न आयुर्वेदिक औषधी वितरण गरेको छ।